नयाँ दैनिक | राजनीति राजनीति – Page9– नयाँ दैनिक
पुस १८, काठमाडौं । सरकारले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति विपरित यस्तो प्रतिवेदन तयार भएको हो । डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था ...
पुस १७, काठमाडौँ । डा.गोविन्द केसी इलाम पुगेका छन् । सरकारले माग पुरा नगरेपछि डा गोविन्द केसी अनशन बस्न यो पटक इलाम पुगेका हुन् । उनले भोलिबाटै अनशन थाल्ने बताइएको छ । डा केसीको यो १६ औं अनसन हो ।
सरकारलाई माग पुरा गर्न पटक पटक समय दिँदा पनि आलटाल गरेको भन्दै उनले १६ औं अनसन सुरु गर्न लागेका हुन्। डा केसीको माग र सरका...
पुस १६, काठमाडौँ । विवेकशील र साझा पार्टीबीचको एकताबाट बनेको नयाँ दल ‘विवेकशील साझा’भित्र विवाद बढ्दै गएको छ । एकता हुनुपूर्व रविन्द्र मिश्रले साझा र उज्वल थापाले विवेकशील पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए । दुई पार्टी चुनावअघि नै एकता गरेर संयुक्त नेतृत्वमा चुनावमा होमिएका थिए ।
प्रभावकारी प्रचार र वहसले विवेकशील साझा पार्टी जनताको बीचमा छि...
पुस १६, गोरखा । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार काण्डैकाण्डमा फसेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, गोरखाद्वारा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले वर्तमान सरकार वाइडवडी, सुन, चिनी लगायतका विभिन्न काण्डमा फसेको आरोप लगाएका हुन् । काण्डैकाण्ड मच्चाएर प्रधानमन्त्रील...
पुस १६, काठमाडौं । नेकपाका नेता योगेश भट्टराई र डा. गोविन्द केसीबीच जुहारी चलेको छ । डा. गोविन्द केसीले संसदीय समितिमा आउन अस्वीकार गरेपछि सांसद भट्टराई र केसीबीच जुहारी चल्न थालेको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डा. केसीसँग छलफल गर्ने जिम्मा भट्टराई र कांग्रेस सांसद गगन थापालाई दिएको थियो । तर, केस...
ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालद्वारा...
पुस १३, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ यतिबेला । बहुमत मात्रै होइन, दुईतिहाई बहुमत छ यो सरकारसँग । ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी पार्टी नै एकता गरी केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त नेतृत्व गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा छन्, दुई मध्येका एक अध्यक्ष–ओली । यही सरकारको नारा छ–सुखी नेपाली, समृ...